African Weasel - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
African Weasel [Poecilogale albinucha]
Ubunzima nobukhulu bomzimba ngu-300mm, kwaye umsila uphakamisa i-175mm. I-African Weasel inomlinganiselo we-250-350 gr. Zinemizimba emide enemilenze emifutshane kunye nemigca emnyama emhlophe neyemhlophe emide emva emqolo. Ingentla yentloko inomsila omhlophe.
I-African Weasel ixhomekeka ngokukodwa kwiimpuku ezincinci kunye neentaka ezincinci emhlabeni, ngelixa iintlobo zezinambuzane zithathwa ngezinye izihlandlo. Ixhoba lilunywa entanyeni ngelixa lilawula ngayo ngokulibetha nge-milenze milenze angaphambili nangokukhupha ngapha nangapha ukuze iphosanise isilwanyana. Ngaloo nto ixhoba liyakhutshwa emva kokuba iinyawo ezinqamle zixhaswe kunye nomzimba ophantsi wexhoba, ukwenzela ukuphula umqolo.
I-African Weasel ngokuqhelekileyo ibeleka iintsana nganye ngexesha, ngalinye libandakanya enye ukuya kweyantathu ye-altricial. Ukuzaliswa kwenzeka ngexesha lentsasa kunye nehlobo. Amabhinqa abeleka emva kwexesha lokunyuka kweentsuku ezingama-shumi amathathu nambini. Abaselula bahlakulela amazinyo emvula emva kweentsuku ezingama-shumi amathathu anesihlanu kwaye amehlo azo avuleka emva kweentsuku ezinga-mashumi amahlanu amabini. Ezinye Imbewu zikhula kwiiveki ezingama-shumi amabini kodwa inokubulala inxuwa ngee veki ezine- Shumi elinantathu.
IiAfrican Weasel zihlala kumaqela amancinci asekhaya emabini ukuya kwe zine ngexesha lokuxhatshaza okanye xa ekhulisa iintsana zayo, kodwa ngokuqhelekileyo zihlala zodwa.
Indawo yokuhlala efanelekileyo ifaka iindawo ezinobuncwane okanye iziqithi ezinemvula engaphezu kwe-700 mm ngonyaka, kunye neendawo apho impuku ezincinci zihlala khona. Ngokuqhelekileyo kunqabile, kwaye ngenxa yamanani okuchithwa kwendawo yokuhlala kukholelwa ukuba ayehla kwiindawo ezithile.
Imephu apho bafunyenwe khona iAfrican weasel isasazwa kwiindawo ezisempuma ye-Afrika ye-Afrika, kwaye iphinda iya ngasentla ukuya kwiCentral Africa kwaye ivela kwimimandla enxweme esezantsi-mpuma ngasentla kwe Zulu-Natali, eMpumalanga, eGauteng nakwiPhondo eliseMntla.